BOOTABLE FLASH DRIVE ကို WINDOWS7ကိုဖြစ်ပါတယ် - WINDOWS ကို - 2019
CD များနှင့် USB flash ကိုဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အကာတိုးပွားလာကွန်ပျူတာများ, Laptop နှင့် netbook များအရေအတွက် built-in ပါပွီ drive ကိုသေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်းမောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုပေးထားသော, bootable flash drive ကို Windows7ကိုမကြာခဏသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် operating system ကို install လုပ်ဖို့အများဆုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကို manual မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် USB flash drive တစ်ခုဖြစ်စေလိုသောသူတို့အဘို့သာရည်ရွယ်ပါသည်။ ဖန်တီးရန်ဒါ,6နည်းလမ်းများ။
။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: ဘယ်မှာငါအခမဲ့နှင့်တရားဝင်မှုအတွက်က ISO အများဆုံး (Ultimate) ၏ Windows7ကို image ကို download လုပျနိုငျ
Windows7နဲ့တစ်ဦး bootable USB drive ကိုဖန်တီးရန်အရာရှိတဦးကလမ်း
ဤနည်းလမ်းကို, ထိုမှတပါး, တစ်ဦး bootable usb ကို Windows7ကို USB drive ကိုဖန်တီးရန်အရာရှိတဦးကမိုက်ကရိုဆော့ဖလမ်းကိုလည်းအများဆုံးရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဒီမှာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ဆိုက်ကနေ tool ကို Windows7ကို USB က / DVD ကိုဒေါင်းလုပ် Tool ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်: //archive.codeplex.com/?p=wudt
သင်တို့သည်လည်းနောက်ထပ် Windows7၏ဖြန့်ဖြူးနဲ့ disk ကိုတစ်ဦးက ISO image ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည် - အားလုံးအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။
ဒီ tool က Windows7ကို USB / DVD ကိုဒေါင်းလုပ် Tool ကို Run
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများတွင် Windows7ကိုဖြန့်ဖြူး၏က ISO image ကိုမှလမ်းကြောင်းရိုက်ထည့်ပါ
Next ကိုတစ်ဦး disk ကိုစာရေးဝင် - သည် သင်ချောင်းကို၏အက္ခရာသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
Windows7ကိုအတူ bootable flash drive ကိုစောင့်ဆိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်
ဒါကအားလုံးရဲ့ကသင်သည်ယခု CD များဖတ်ရှုခြင်းများအတွက် drive ကိုမရှိဘဲကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Windows7ကို install လုပ်ဖို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မီဒီယာကိုသုံးနိုင်သည်။
bootable flash drive ကို WinToFlash နှင့်အတူ Windows7ကိုဖြစ်ပါတယ်
WinToFlash - သင်က Windows7နဲ့တစ်ဦး bootable USB flash drive ကို (နှင့်မရမယ့်စာရင်းတစ်ခုအလွန်ကျယ်ပြန့်သည်) ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုနောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင် site ကို //wintoflash.com အပေါ်အခမဲ့အဘို့ဤ app ကို download လုပ်ပါ။
Windows7နဲ့တပ်ဆင် flash drive ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့သင်တစ်ဦး CD ကိုတပ်ဆင်ထားပုံရိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ် Windows ကိုဖြန့်ဖြူးဖိုင်တွေဖိုလ်ဒါကို 7. လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တခြားအရာအားလုံးကအရမ်းရိုးရှင်း - ပဲ bootable USB drive ကိုဖန်တီးရန် wizard ကိုအတွက်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပြည့်စုံသည်နောက်, Windows7ကို install လုပ်, သင်ရုံကို PC ရဲ့ BIOS ကို, လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် netbook အတွက် USB မှတ်ဉာဏ်ချောင်းကိုကနေ Boot တက်သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
WinToBootic utility ကို
အလားတူပင် utility ကို Windows7ကို USB / DVD ကိုဒေါင်းလုပ် Tool ကို, ဒီအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးတည်းသာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ် - Windows7ကို install ဖို့ bootable USB drive ကိုအသံဖမ်းသို့သော်မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှတရားဝင် tool ကိုမှမတူဘဲအချို့အားသာချက်များရှိပါသည်:
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအရင်းအမြစ်ဖိုင်တွေအဖြစ်ဖြန့်ဖြူးဖိုင်တွေသို့မဟုတ် DVD ကို drive ကိုအတူလမ်းက ISO နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်း folder တစ်ခုနှင့်အတူမသာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး
အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအဘို့, အားလုံးအတူတူပါပဲ, သင်က bootable USB flash drive ကို Windows7အဖြစ် operating system ကို၏ installation files တွေကိုမှလမ်းကြောင်းကိုစေလိုသည့်မီဒီယာကိုညွှန်း။ ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးနောက်တစ်ခုတည်း button ကို - "! ကြောင့်သလား" (Make) နှင့်သငျသညျအတိုသောကာလ၌ပြုသောအမှုပါတယ်။
Windows7နဲ့တစ်ဦးတပ်ဆင်ခကို USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်နောက်ထပ်ဘုံလမ်း - အသုံးပြုမှု UltraISO ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုရှိသောကို USB device ကိုပုံရိပ်တစ်ခုက ISO ကို Microsoft Windows7ကိုဖြန့်ဖြူးမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်စေရန်အလို့ငှာ။
program ကို UltraISO အတွက် Windows7အဲဒီ ISO ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ, တစ်ဦးကို USB flash drive ကို connect
"Bootstrap" menu ကို, ကို select ခုနှစ်တွင် (Disk ကို Image ကိုရေးပါ) "hard disk ကို image ကို Burn"
အဆိုပါ Disk ကို Drive ကိုလယ်ကွင်းမှာစာကိုချောင်းကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်လျက်, "Image ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း" တွင်ပွင့်လင်း UltraISO ကို Windows7image ကိုအတွက်သတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့ရှိပါတယ်လိမ့်မယ်။
"Format ကို" ကိုနှိပ်ပါနှင့်ပုံစံပြီးနောက် - "Burn" ။
ဒီ bootable flash drive ကို UltraISO အဆင်သင့်သုံးပြီး Windows7ကိုမှာ။
အခမဲ့ utility ကို WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB - ကိုတပ်မက်လိုချင်သောအက USB flash drive ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့်အခြားပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစီအစဉ်အတွက် bootable Window7ကို USB drive ကိုအတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အားအဆင့်သုံးဆင့်အတွက်ရာအရပ်ကိုကြာ:
Bootice (ထို WinSetupFromUSB ၏အစိတ်အပိုင်း) ကို အသုံးပြု. ပုံစံကို USB storage device
Bootice အတွက် MasterBootRecord (MBR) မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
WinSetupFromUSB ကိုသုံးပြီး USB flash drive တစ်ခုပေါ်သို့စံချိန်ကို Windows7installation files များ
ယေဘုယျအားဖြင့်ဒါဟာလုံးဝရှုပ်ထွေးချည်းနှီးဖြစ်၏နှင့်နည်းလမ်းကြောင်းအတွက်ကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, တခြားအရာအကြား, သင်ချောင်းကိုဖန်တီး multiboot ခွင့်ပြုပါတယ်။
bootable flash drive ကို diskpart သုံးပြီး command line ကိုအပေါ်ကို Windows7ဖြစ်ပါသည်
ဒီလက်စွဲထဲမှာဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်ဟူသော, နောက်ဆုံးနည်းလမ်း။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာများနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ် (သို့မဟုတ် disk ကို၏တပ်ဆင်ထားပုံရိပ်) နဲ့ဒီဗီဒီတစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေ Windows7ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
အုပ်ချုပ်သူအဖြစ် command prompt ကို Start နှင့် diskpart command ကိုရိုက်ထည့်ပါ, သင် diskpart command များကိုရိုက်ထည့်ပါသတိပေးခံရပါလိမ့်မည်ရလဒ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမိန့်များတွင်အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ:
diskpart> စာရင်း disk ကို (သင့် flash drive ကိုမှကိုက်ညီသောအရေအတွက်ကိုသတိပြုပါ)
diskpart> select လုပ်ပါ disk ကိုနံပါတ်တစ်-ချောင်းကို-In-ယခင် command ကို
diskpart> partition ကိုမူလတန်းဖန်တီး
diskpart> select လုပ်ပါ partition ကို 1
အမြန် diskpart> format ကို FS = NTFS
ဤအတူကျွန်တော်တစ်ဦး Boot တက်သို့ယင်း၏အသွင်ပြောင်းဖို့လေ့ကျင့်ရေးချောင်းကိုပြီးဆုံးပါပြီ။ ထို့နောက် command line ကိုရိုက်ထည့်ပါ:
CHDIR W7:  Boot တက်
အဲဒီအစားဝင်ထို့နောက် Windows7၏ဖြန့်ဖြူးနဲ့ drive ကိုစာတစ်စောင်ကိုသတ်မှတ် W7:
bootsect / nt60 ကို USB:
ထိုစာကို USB ချောင်းကိုအစားထိုး (သို့သော်အူမဖယ်ရှားမပါ) ။ ကောင်းပြီ, သင်က Windows7ကို install လုပ်လိုသောဖိုင်တွေအားလုံးကို copy လိမ့်မည်ဟုပြီးခဲ့သည့်အဖွဲ့သည်:
XCOPY W7 :.  * * ကို USB:  / E / F / H ကို
ဒီ command များတွင် - W7 operating system ကိုဖြန့်ဖြူးများ၏ drive ကိုစာတစ်စောင်နှင့်သင်၏ USB drive ကိုစာတစ်စောင်အပေါ်ကို USB ကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်မိတ္တူလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်, သို့သော်လည်းအဆုံး၌သငျ Windows7ကို run နေတဲ့ bootable USB flash drive ကိုရယူပါ။
ဗီဒီယို Watch: Mufti Kannada Dubbed Hindi Full Movie 2017. ShivaRajkumar, SriiMurali. 2018 Sandalwood Action Movie (နိုဝင်ဘာလ 2019).